Ukuphuhlisa i-Balloons Science Project
Sayensi Imisebenzi yabantwana
Ukutshatyalaliswa kobuhlungu Ukusebenzisa Izinto ezingenakutsha
Ndiqinisekile ukuba uyazi ukuba unako ukugcwalisa ibhaluni ngegesi elivuthayo, utshaye kwaye uyibangele. Kutheni malunga nento encinci yingozi? Nantsi iphrojekthi ekhawulezayo kwaye elula ongayenzayo evumela ukuba uvelise umlilo, ngaphandle kokubeka ingozi enkulu kuwe, kwabanye okanye kwipropati. Nantsi into oyenzayo:
Ukuxhamla izixhobo zeBhalloon
Uya kufuna iibhaluni ezincinci kunye nenye okanye ngaphezulu kwezi powders ezilandelayo:
Kukho amanye ama-powders aya kusebenza, kodwa oku akusiyo inetyhefu kwaye kungeyonto evuthayo.
Yenza i-Exploding Balloons
Yongeza nge-teaspoon yeyiphi na yezi powders kwibhaluni. Ukuba unesithelwana esincinci, oko kuya kunceda lula izinto. Ngaphandle koko, qalela iphepha kunye kwaye ulisebenzise ukuhambisa ipowder kwibhaluni.
Vulela ibhaluni uze uyibophe. Unokwenza le ndlela endala okanye ungasebenzisa umoya ocinezelekileyo. Ukuba unotyeki ungasebenzisa i- oksijeni okanye i- hydrogen , kodwa inokutshatyalalisa injongo yeprojekthi yam ekhuselekileyo.
Beka ibhaluni emgama kude nawe kwaye usebenzise i-lighting okanye ikhandlela kwintonga yokumitha ukuyipapa kwaye ugalele i powder.
I-Recipe ekhanyayo yeSlime Recipe
Indlela Yokwenza Ukukhanya Ngumnyama Omnyama
Iinqununu zeekiti zeNeon kunye neGlow Magic Powerballs - Ukuphonononga
I-Anti-Gravity Science Water Magic
Easy Recipe yeOobleck
Iiprojekthi zeSayensi zeBook Soda
Project Tornado Project
Uvavanyo lweRecacid Rocket
I Bhagavad-Gita - Intshayelelo kunye neSahluko seSahluko
Yintoni endiyibuyisela yona uRose Doré ukuba ayikho into enzima kakhulu?
Iqela leNkundla yamahhala
Indlela Yokugwema I-Homeschool Burnout
I-Octet Rule Explication in Chemistry
Ukuhlaziywa kweNkundla ye-Courts: I-TestDEN TOEFL
Imizekelo yeeNqaku kunye neMpawu zazo
UWilliam Carey University Admissions
Ukuhlaziywa kwe-Honda Grom ka-2014: Ibhayisikili elincinci, i-Big Thrills
Ixabiso le-Apple Certification
Uvavanyo lukaJohn Peter Zenger
Intruder Ingena kwikamelo lokulala likaElizabeth Elizabeth
Intaba yeTambora yaba yiNtshontsho enkulu yeVolcanic ye-19th Century
I-SAT izikolo zokungeniswa kwiiyunivesithi ezingama-23 zase-Cal
IYunivesithi yaseFranciscan yaseStubenville
Ukuhlolwa kweMTDNA yeGenealogy
Iiprojekthi zeSayensi zePasika
Abakwa-Colby College Admissions
Quote Margaret Fuller
Indlela Yokuvula I-C6 Corvette NgeBhetri Efile
Iimifanekiso zeClassic Disney ze-1950s